Maxaa kala heysta waratada iyo guddiga ganacsatada ee Islii? - BBC News Somali
Maxaa kala heysta waratada iyo guddiga ganacsatada ee Islii?
Waxaa maalintii sedexaad xiran suuqa xaafada Islii ee magaalada Nairobi kaddib markii ay isku dheceen gancsatada dukaamada iyo bakhaarada ku leh halkaas iyo dad warato ah oo horay dowladda hoose ee Nairobi uga rartay wadooyinkii ay ku ganacsan jireen.
Waratada oo maxkamad heer degmo ah u dacwooday ayaa loo ogalaaday in ay ku ganacsan karaan dariiqyada waaweyn ee xaafadda Islii, hase ahaatee waxa arrintaasi ka horyimid guddiga ganacsatada ee xaafad Islii .
Hadaba si aan wax badan uga ogaano halka ay kala marayaan labada dhinac ee iska hor imaadku dhex maray ayaan waxaanu ka waraysannay guddoomiyaha guddida ganacsatada ee xaafad Islii , Xaaji Ibraahim Maxamuud Xuseen, wuxuuna khadka teleefoonka ugu waramay weriyaha BBC-da Axmed Nagaashe.